Shiinaha Kuleyliyaha tooska ah ee elektromagnetic/gaaska Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha |INCHOI
Kuleylinta tooska ah ee korantada/gaaska kuleyliyaha Multi-Shaft walaaqaya/kariyo
Tilmaamaha Waxqabadka:1. Si toos ah u walaaqaya shafka badan ee shiilan iyo shiilan (maqaarka wax kicinaya ayaa rogi kara oo rogi kara);2. Si fudud loo shaqeeyo (jidhka digsiga waa la leexin karaa, walxahana waxaa lagu shubaa awoodda hydraulic);3. Waqti fiican oo shiilan;4. Isku qas / isku dar si isku mid ah;5. Kuleyliyaha korantada waa badbaadinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka, badbaadinta korontada marka la barbar dhigo kuleyliyaha caadiga ah ee korantada Saliidda, kululaynta si dhakhso ah, heerkulkana waa la xakameyn karaa;6. Digsiga gudaha iyo dibaddaba wuxuu ka samaysan yahay bir aan lahayn, qurux badan, qaab dhismeed iyo si sahlan loo nadiifiyo.
Waxay ku habboon tahay karinta iyo shiilan khudaarta kala duwan, hilibka kalluunka, xashiishyada, daawooyinka iyo agabyada kale.Waxaa si weyn loogu isticmaalaa cunto karinta, habaynta cuntada, wax soo saarka dawooyinka, alaabta braised, diyaarinta xashiishka, cuntooyinka fudud, dubista iyo warshadaha kale.Waxa kale oo loo isticmaali karaa ketchup.Shiilidda alaabta viscosity sare leh sida maraqa hilibka lo'da iyo alaabta dheriga kulul ayaa ah qalab wanaagsan oo loogu talagalay diyaarinta cuntada si loo horumariyo tayada, loo gaabiyo waqtiga, loona wanaajiyo xaaladaha shaqada.
Kuleylku waa dhakhso, heerkulkuna waa la hagaajin karaa;dheriga waxaa ku jira laba heerkulbeeg oo cabbiraya heerkulka jidhka dheriga iyo heerkulka cuntada siday u kala horreeyaan.
Kumbuyuutarrada saxda ah ee xakamaynta heerkulka tooska ah iyo muujinta heerkulka, dejinta otomaatiga ah, qaylo-dhaan otomaatig ah marka wakhtiga ama heerkulka la gaaro, tignoolajiyada farsamaynta way fududahay in la xakameeyo, habka diyaarinta cunnada ayaa leh dib-u-celin wanaagsan, tayo wanaagsan, iyo xasillooni dheeraad ah;
Sababtoo ah kicinta meeraha ayaa loo isticmaalaa, cuntada la warshadeeyay kuma dhejin doonto digsiga, mana samayn doonto burooyin ama kookaha;saliid yar ayay isticmaashaa wayna fududahay in lagu shaqeeyo.Hadhaaga habka shiilan ma fududa in lagu dhejiyo digsiga oo si sahlan loo nadiifiyo.
Makiinada shiilan ee badan waxay isticmaashaa kuleyliyaha korantada sida isha kulaylka (kuleylka gaaska sidoo kale waa la isticmaali karaa).Makiinada shiilan ee isku dubaridka badan waxay leedahay sifooyin kuleyl weyn, hufnaanta kulaylka sare, kuleylinta labbiska, waqti yar oo dareere ah, iyo xakamaynta fudud ee heerkulka kuleylka.Jirka dheriga gudaha (dheriga gudaha) waxa uu ka samaysan yahay bir aan lahayn, kuna qalabaysan xoqida tetrafluoroethylene, Schneider PLC.Muuqaal qurux badan, rakibid fudud, hawlgal ku habboon, ammaan ah oo la isku halleyn karo.
Mashiinka oo dhami waxa uu leeyahay tignoolajiyada alxanka heersare ah, alxanka jiingadaha oo aan kala go 'lahayn, muuqaal cad, dalool la'aan, iyo muuqaalka quruxda badan ee alaabta.
Nidaamka isku-dhafka meeraha-madaxa badan-madaxa badan leh, iyadoo la adeegsanayo isku-dhafka kacaanka iyo wareegga, maaddada waa la kiciyay oo si siman loo kululeeyaa.Qeybta hoose ee dheriga waa la xoqay oo lagu walaaqay 360 darajo iyada oo aan la hayn cidhifyo dhintay si loo hagaajiyo midabka iyo dhadhanka alaabta.
Jirka dheriga gudaha iyo dibadda iyo qaybaha taabashadu waxay ka samaysan yihiin 304 bir ah, taas oo fudud in la nadiifiyo oo buuxisa shuruudaha nadaafadda cuntada.
Daabka kicinta ee loogu talagalay iyo daabka kicinta ayaa ka samaysan PTFE xoog badan, kulayl u adkaysta iyo heerkulka sare, aan sun ahayn, oo buuxiya shuruudaha wax soo saarka cuntada.
xoqiddu waxay leedahay heer aad u sarreeya oo ku dheggan jirka dheriga, iyo xoqitaanka hoose waa mid aad u qoto dheer, iyo ifafaale ku dheggan dheriga ma fududa inay dhacdo.
Ku qalabaysan dab-demiye tamar-badbaadin ah oo gaar ah, gubasho buuxda, hufnaanta kulaylka sare, badbaadinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka, oo lagu rakibay qalabka dahaarka kulaylka u adkaysta, isticmaal tamar-badbaadin badan, waxtarku wuxuu gaari karaa in ka badan 70%.
Hore: Uumiga/gaaska/korontada/electromagnetic kuleylinta Planetary walaaq-kariye/shiil
Xiga: Dib u soo celinta hawada iyo hawada
Mashiinka Isku-dhafka Makiinada
Tefal Multi Cooker Oo Walaaq
Mashiinka duubida hilibka tumbler
Kala saara lafta kalluunka
Qorshaha kuleylka uumiga/gaaska/korontada/electromagnetic...
MEESHA HILIBKA GOOYNTA & GARGAAR